काठमाण्डौ । नेपाली पर्वतारोहण आरोहीको क्षेत्रमा एक स्थापित नाम हो, मिङ्मा शेर्पा । ४३ बर्षिय आरोही शेर्पासँग पर्वतारोहणसँग सम्बन्धीत लोभलाग्दा किर्तिमानका अनुभवहरु संग्रहीत छन ।
पर्वतारोहण क्षेत्र आफैमा चुनौतिपुर्ण छ, जो कोहीले यस क्षेत्रमा चाहेर पनि बाटो तय गर्न सक्दैनन, तर सोलुखुम्बुको हिमाली काखमा बि.स. २०३४ सालमा जन्मिएका शेर्पाका लागि भने आरोहण उत्प्रेरणा दिने कर्म बनेको छ ।
पिता स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पा आफैमा एक सफल आरोही थिए । उनै पिताको २०१४ मा खुम्बु आईपोलमा हिमपहिरोमा परि दुःखद निधन भयो । हिमाली चिसो बतास, यहाँको प्राकृतिक बातावरणका बिच तिनै हिम अवस्थीतिले जिबनमा छाडेको गहिरो पिडाका बिच प्रकृति र जिबनपद्धतीको कर्म बदलिएन, अनि बदल्न चाहेनन र त आज हिम टाकुराहरुले पनि उनको अस्तीत्वलाई स्वीर्कान बाध्य भयो । अनि बन्यो १० औँ किर्तिमान । बुवाको अपुरो सपना हिमपहिरोमा बिलिन भएपनि उनले त्यही हिमपहिरोसँग संघर्ष गर्दै एक सफल आरोहीका रुपमा विश्वलाई आफ्नो क्षमता दर्शाइदिए, सगरमाथाको चुचुरोमा १० औँ पटकको किर्तिमानी आरोहीका रुपमा आफ्नो छबिलाई समेत स्थापित गर्न सफल भए ।
सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गा.पा. वडा नम्बर ४ मा जन्मिएर सोही स्थानको खुम्जुङ माबिबाट औपचारिक अध्ययन गरेका शेर्पा सानैदेखी उर्जावान व्यक्तित्व थिए ।
सन १९९८ मा पहिलोपटक काठमाण्डौ आएका शेर्पा सुरुमा ठमेलको ज्याठामा बस्थे । रोजगारको सिलसिलामा काठमाण्डौ आएका भएपनि सुरुमा उनले निकै हण्डर सहनुपर्यो । लामो समयको अनिश्चयको दैनिकीपछि उनको भेट पासाङ तेम्बा शेर्पासँग भयो । पासाङ उनका बाबुका साथी रहेछन । मिङ्माको अनुरोधपछि उनै पासाङले पर्वतारोहण क्षेत्रमा सँगै डोर्याएको मिङ्मा सम्झन्छन । निकै अप्ठेरो परिस्थीतिमा पासाङसँग भेट भयो, काठमाण्डौमा चिनेजानेको कोही पनि थिएनन, यस्तो अवस्थामा पासाङले पर्वतारोहण क्षेत्रमा आफुसँगै काम गर्न मिलाईदिन्छु भन्दा उनी कम्ता खुसी थिएनन रे ।
जिबनको बाटो जति नै संघर्षपूर्ण भएपनि एकदिन जिबनले कोल्टे फेर्न करै लाग्छ । ठिक त्यस्तै भयो उनको जिबनमा पनि । जस्तो संगत उस्तै फल भनेझै काठमाण्डौ आएको सुरुवाती बर्ष १९९८ मा नै उनले पहिलोचोटी ८ हजार मिटरको चुचुरोसम्म पुग्न सफल भए । उनी सम्झन्छन, उतिबेला पासाङ पनि म सँगै हुनुहुन्थ्यो, जिबनकै पहिलो व्यावसायिक खुड्कीलो हिड्न उनले उत्प्रेरित गरिदिए, मिङ्माले पनि हिम्मत हारेनन, अन्ततः ईतिहास बनेरै छाड्यो, १० औँ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने किर्तिमानी आरोहीका रुपमा ।
त्यसपछि आरोहण व्यावसायिक रुपमा उनको जिबनमा प्रवेश भयो । यसबिचमा उनले कयाँै आरोहण पुरा गरिसकेका छन । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न चाहने तर आफुमा बिश्वास नभएकाहरु समेतलाई उनले उत्प्रेरणा भरिरहे ।
फलस्वरुप उनको उत्प्रेरणाले फरकफरक किर्तिमान रच्न सफल भएको छ । सन २०१२ मा एक ७२ बर्षिय जापानी महिलाले सबैभन्दा पाको उमेरमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने रेकर्ड बनाईन, जसका लागि मिङ्माले आरोहणको संयोजन गरेका थिए । उनीमात्र होईन, सन २००९ मा अमेरिकन वल्डेस्ट म्यान(६७) र सन २०१६ मा एक अमेरिकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत सगरमाथाको सफल आरोहण पुरा गराउने कार्यको नेतृत्व उनैले गरेका थिए ।
यति मात्र होईन सन २०१३ मा नेपाल र तिबेट दुबै क्षेत्रबाट सगरमाथाको उचाईमा ८ दिनभित्रै पुग्न सफल व्यक्तिको रुपमा समेत उनले रेकर्ड बनाउन सफल भए । उनले बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका व्यानरहरु समेत सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याईसकेका छन । जसअन्र्तगत सन २०१२ मा एभिन्यूज टेलिभिजनको व्यानर, सन २०१३ मा पत्रकार महासंघको लोगो समेत आरोहणका बखत सगरमाथाको चुचुरोमा फहराईसकेका छन ।
हाल बौद्ध ६ महांकालमा एक छोरा पेम्बा छिरिङ शेर्पा, छोरी छिरिङ फुटि शेर्पा, श्रीमती ङा डोमा शेर्पाका साथमा बस्दै आएका उनका ३ बहिनी र एक दाई रहेका छन ।
सन २०१५ मा ठमेल केशरमहलमा स्थापित क्लाईमबलाय मार्फत उनको व्यावसायिक आरोहण व्यावसाय स्थापित रहेको छ । ठमेलमा आउने बिदेशी पर्यटकहरु उनले बिगतमा प्राप्त गरेका बिभिन्न रेकर्डहरुकै कारण आरोहणका क्षेत्रमा उनका प्रतिष्पर्धी भन्दा मिङ्मा निकै रुचाईएका व्यक्ति हुन ।
व्यावसायिक जिबनमा उनी आजको दिनमा जति सफल देखिन्छन, त्यति नै उनको समाजसेवाको यात्रा पनि फराकिलो छ ।
सन २०१२ मा ‘यम्बु ठमीछो किदुङ’ स्थापना गरेर त्यसको प्रेसिडेन्टका रुपमा उनले समाजसेवालाई पनि आफ्नो जिबनको अभिन्न पाटोका रुपमा अगाडी बढाएका छन ।
हालकै स्थीतिमा पनि लामो समयको लकडाउनमा परेर रोजगार गुमाएका मजदुर परिवारहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्न उनी तल्लीन देखिन्थे । ठमेलका अन्य व्यावसायीहरु व्यावसायिक जोडघटाउमा व्यस्त भैरहँदा उनी भने अप्ठेरो परेका व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाउन व्यस्त थिए । केही समयअघि मात्र सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा परि क्षति बेहोरेका परिवारलाई आवश्यक नगद तथा अन्य सहयोग गर्न समेत मिङ्मा पुगेका थिए । यसका साथै उनकै आफ्नै जन्मस्थान पासाङल्हामु गा.पा. मा पनि बिभिन्न सहयोग गर्दै आएका छन ।
आजका दिनसम्म आईपुग्दा समाजसेवी, उर्जाशिल र पर्यटन क्षेत्रका डायनामिक व्यक्तित्वका रुपमा मिङ्माको परिचय फराकिलो छ ।
आफुले बिगतमा खेपेको हण्डर र निरासापुर्ण संघर्षलाई नजिकबाट नियालेका मिङ्मा युवा पुस्ताहरुमा नयाँ सोच र जिबनलाई कर्मशिल बनाउने उत्प्रेरणा स्रोतका रुपमा प्रश्तुत भएका छन । भन्छन, ‘युवा पुस्ताको भविश्य चम्किलो छ, केही क्षणको अप्ठेरोलाई सम्झेर पुरा जिबलाई अनिश्चय तर्फ होईन, संघर्षबाट स्थापित हुन कोशिस गरिरहन जरुरी छ ।’ यस्तोमा काम नपाएर भौतारिएका उनका विगतका दौतरीदेखी अहिलेका युवा पुस्तालाई समेत रोजगारीको प्रवन्ध गरिदिने, सरसल्लाह र उत्प्रेरणाका स्रोत हुन मिङ्मा ।
अध्याँरो र सन्नाटा जतिसुकै गहिरो भएपनि उज्यालो आएरै छाड्छ, मिङ्माको जिबन बिश्वास यसैमा टिकेको छ । उनको कर्मशिल र समाजसेवी दैनिकी आज पनि दौडिरहेकै छ । यात्रा जारी रहोस, कामना ।